Zavatra telo loha no hodinihintsika amin'ity paragrafy ity:
21 - Fiandohany:
Ny "Théosophie" dia teny tanainy tokoa, satria nisy taloha elan'ny "fahotana" aza izy. Nipoitra avy amin'ny foto-pisainana tatsinanana izy. Araka izany dia "Panthéiste" izy (ny zavatra rehetra aminy dia andriamanitra avokoa). Raha ampitahaina amin'izay ambaran'ny Tantaram-piangonana izy, dia mitovy tsy misy valaka amin'ny "Gnosticisme".
Ramatoa Hélène Petrovna BLAVATSKY, velona tamin'ny taon-jato faha-19 (1831-1891) no nanazava be kokoa ny niandohan'ity sekta ity. Vehivavy rosiana anisan'irony antsoina hoe "Médium Spirite" irony izy. Nanao izany asa izany nandritra ny folo taona mahery izy, nka nitety tany maro eran'izao tontolo izao. Tamin'ny 1847 - 1857 no nandehanany tany Tibet, ka nianarany ny "zava-miafin'i Mahtmas". Ko tamin'ny taona 1875, no azo lazaina kho niorina ofisialy tany New York (Etazonia) ny fikambanana Teozofika. Ary tamin'ny 1879 no niorenany tany Madras (Inde); fa ny tany Londres (Angletera) kosa dia efa taty amin'ny 1887.
Foto-kevitra telo no iompanan'ny fivondronany, ka iaingan'ny fampianarany:
211 - Mamory fivondronam-bem-pirahalahiana eran-tany, ka tsy manavakavaka ara-pirazanana, na finoana, na volon-koditra. Ka ny firahalahiana ara-pivavahana no fototra voalohany
212 - Famporisihina ny mpikambana hanadihady sy handalina ny fampitahana ny karazam-pivavahana misy sy ny filozofia ary ny siansa.
213 - Manao fikarohana mitohy ny anton'ny lalàn'ny natiora, indrindra ireo tsy mbola takatra hatramin'izao; ary hikaroka sy hampiasa ny hery ananan'ny olombelona, izay fantatra fa ahavita zava-dehibe eo amin'ny tontolo iainana.
22 - Mpanorina sy Mpitarika:
Ireto avy ny Manorina sy Mpitarika lehibe ao amin'ny Fikambanana Teozofika:
- Hélène Petrovna BLAVATSKY sy ny Colonel OLCOTT
- Annie Besant, ny ngeza indrindra tamin'ny nandimby an'i Hélène Petrovna
- Krishnamurti, Indiana izay nambaran'i Anni Besant ho Mesia.
23 - Fitaran'ny Fikambanana:
Ny Fihezahan'i Ramatoa Hélène Petrovna sy Olcott nitety an'i Inde, no nahatonga ny fampianarana teozofika hifamahofaho amin'ny fampianarana Hindous sy Bouddhistes.
Nambaran-dRamatoa Besant, mpandimby an'i Ramatoa Hélène, fa ny zaza natsangany no ho Mesia, na izay antsoina hoe "Mpampianatra lehibe" (Grand Maître). (tamin'ny taona 1825 no efa nipoiran'izany foto-kevitra izany). Tsy nahavita ny andraikiny amin'ny maha-Mesia azy anefa Krishnamurti, hany ka somary nangingina kely ny fampielezan-keviny. Tsy azo lazaina fa fivavahan'ny daholobe anefa ny teozofia. Ny Teozofia dia tsy hafa fa ny "Gnosticisme" ankehitriny. Ny fahalalana ananan'ny olona no aderaderany ho ny zava-dehibe indrindra.